करियर छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु Victor Mochere
प्रत्येक वर्ष लाखौं विद्यार्थीहरू विश्वभरका विश्वविद्यालयहरू र कलेजहरूका प्रमुखहरूमा सामेल हुन्छन्, उत्साह र महत्वाकांक्षाका साथ बिस्तारै तिनीहरूले उज्ज्वल भविष्य हुनेछ भन्ने विश्वासमा कदम चाल्छन्। ठिक छ, त्यो भविष्यको सम्भावनाहरू धेरै हदसम्म एउटा प्रश्नद्वारा निर्धारण गरिनेछ: कस्तो करियरको बाटो लिने? जबकि कसै-कसैले पहिले नै क्यारियर मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने फाइदा पाएको हुन सक्छ, अरूको सम्भावित बहुमतले त्यो प्रश्न धेरै पछि सामना गर्नेछ।
आदर्श रूपमा, त्यो प्रक्रिया पोस्ट-प्राथमिक शिक्षाको प्रारम्भिक वर्षहरूमा सुरु हुनुपर्छ, तर यो उपयुक्त क्यारियर पहिचान गर्न कहिल्यै ढिलो हुँदैन। त्यहाँ छनोट गर्न धेरै क्यारियरहरू छन् जसरी तृतीयक संस्थाहरूमा उपलब्ध अनुशासनहरू छन्। व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू अझ धेरै विविध छन्। त्यसोभए कसैलाई कसरी पहिचान गर्ने र छनौट गर्ने बारे जान्छ कि उनीहरूले बाँकी- वा ​​धेरैजसो- उनीहरूको सक्रिय वयस्क जीवन कसरी बिताउने? त्यहाँ5सूचकहरू (P's) छन् जुन एक उपयोगी कम्पास बनाउँछ जब करियर छनोट गर्नको लागि अज्ञात उच्च समुद्रहरू नेभिगेट गर्दा।
करियरको बाटो छनोट गर्दा तिनीहरू किन महत्त्वपूर्ण छन् भनी हेर्नको लागि एक एक गरेर अन्वेषण गरौं।
4. व्यावसायिक एक्सपोजर
5. व्यक्तित्व प्रकार
जोश एक बलियो इच्छा हो जसले तपाईंलाई अचम्मका चीजहरू गर्न सक्छ। आफूलाई के मन लागेको कुरा खोज्नु आफैमा एउटा यात्रा हो। अझै थाहा छैन भने निराश नहुनुहोस्। नयाँ कुराहरू प्रयास गरिरहनुहोस्। बनाउनु परे पनि आउँछ । आफ्नो जोश संग पङ्क्तिबद्ध एक क्यारियर छनोट गर्नु भनेको व्यावसायिक पूर्तिको जीवनभर छनौट गर्नु हो। के हुन्छ यदि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंसँग कुनै चीजको लागि जोश छ तर तपाईंले यसको बारेमा केही गर्नुभएन?
यो जोश संग मुख्य समस्या हो। तपाईसँग केहि चीजको लागि संसारमा सबै जुनून हुन सक्छ, तर यदि तपाईले यसको बारेमा केहि गर्नुभएन भने, तपाईलाई थाहा छैन कि तपाई वास्तवमा के सक्षम हुनुहुन्छ। अब यसमा काम सुरु गर्नुहोस्! त्यो क्लबमा सामेल हुनुहोस्, त्यो खेल खेल्नुहोस्, त्यो गतिविधिमा संलग्न हुनुहोस् जसले तपाईंको जुनूनलाई ड्राइभ गर्छ। जुनूनले तपाईंलाई काम पूरा गर्नको लागि मध्यरातमा ब्यूँझाउनेछ। जोशले तपाइँलाई तपाइँको दृष्टि संग पङ्क्तिबद्ध नभएका विचलनहरूलाई होइन भन्न लगाउनेछ। जुनून भनेको ड्राइभ हो जसले तपाईंको क्यारियर अनलक गर्नेछ। यो ईन्धन हो जसले तपाईंलाई बाटोमा सबै चुनौतीहरू पार गर्नेछ।
जोशको अतिरिक्त, एकले आफ्नो सपनाको क्यारियरमा नेतृत्व गर्ने विषयहरूमा अकादमिक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्छ। तपाईं औषधिको बारेमा भावुक हुन सक्नुहुन्छ तर विज्ञान विशेष गरी जीवविज्ञानमा तपाईंको प्रदर्शन धेरै कम छ। तपाईंले कि त त्यो विषयमा थप स्मार्ट काम गर्न आवश्यक पर्दछ, वा अर्को क्यारियर विकल्पको पछि लाग्न सक्छ।
याद गर्नुहोस् कि विश्वविद्यालयहरू र कलेजहरूले तपाइँलाई तपाइँको ग्रेडहरूमा भर्ना गर्नेछन् पहिले उनीहरूले तपाइँ आफ्नो क्यारियर छनौटको बारेमा कत्तिको भावुक हुनुहुन्छ भनेर हेर्नु अघि। ग्रेडहरूले तपाईंलाई बेच्नेछ, तर जुनूनले तपाईंलाई ड्राइभ गर्छ। पत्ता लगाउनुहोस् कुन विषयहरूले तपाईंको क्यारियरलाई समर्थन गर्दछ। त्यसपछि तिनीहरूलाई सुधार र उत्कृष्ट बनाउन प्रतिबद्ध। जबकि क्यारियर सल्लाहकारहरूले तपाईंको क्यारियरको लागि विषय आवश्यकताहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छन्, तपाईंको क्यारियर विकल्पको लागि आवश्यक ग्रेडहरू प्राप्त गर्ने जिम्मेवारी तपाईंमा छ।
आफ्नो क्यारियर छनोटमा निर्णय गर्न पर्याप्त छैन। तपाईंले त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ। क्यारियर-योजना प्रक्रियाले तपाईंलाई आफ्नो शक्ति र रुचिहरू पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ जसले गर्दा तपाईंले रमाइलो गर्न सक्ने व्यावसायिक अवसरहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र क्यारियर निर्णयहरू। आफ्नो करियरको योजना चाँडै सुरु गर्न आवश्यक छ। कति चाँडो धेरै चाँडो छ? मलाई विश्वास छ कि औपचारिक स्कुलिङमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, एक व्यक्ति पहिले नै क्यारियर योजनाको लागि उजागर हुन्छ।
जहाँसम्म करियरको सवाल छ, कतिपय विद्यार्थीहरूलाई उनीहरू जीवनमा के गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा राम्ररी थाहा हुन्छ। कतिपयलाई थाहा छैन । कारण यो हो कि अधिकांश विद्यार्थीहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा पेशेवरहरूसँग सम्पर्कमा छैनन्। म सधैं आमाबाबु र अभिभावकहरूलाई आफ्ना छोराछोरीलाई विभिन्न क्यारियरहरूमा आफ्ना साथीहरूसँग खुलाउन प्रोत्साहन दिन्छु। मनोवैज्ञानिक रूपमा, बच्चाहरूले अवलोकन र अनुकरण मार्फत सिक्छन्। विभिन्न पेशा र करियरहरूमा एक्सपोजरले उनीहरूको रुचि जगाउँछ। यो काम, वा व्यावसायिक छाया, इन्टर्नशिप, क्यारियर वार्तामा भाग लिने, वा विभिन्न संस्थाहरूको भ्रमण मार्फत गर्न सकिन्छ।
करियर छनोटमा व्यक्तित्व किन महत्त्वपूर्ण छ? तपाइँको व्यक्तित्व सिक्न तपाइँ तपाइँको भावना, व्यवहार, र सोच ढाँचा को कदर गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, के तपाई एक्लै काम गर्न रुचाउनुहुन्छ, वा अरुसँग काम गर्न रुचाउनुहुन्छ? के तपाइँ एक क्यारियर मा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि तपाइँ अत्यन्त संगठित हुनु पर्छ र एक निर्धारित तालिका छ? वा तपाइँ व्यक्तिको प्रकार हुनुहुन्छ जसले तपाइँलाई सहज हुन अनुमति दिने खुला, लचिलो तालिका मनपर्छ? यो जानकारीले तपाइँलाई तपाइँको व्यक्तित्व प्राथमिकताहरु संग मेल खाने क्यारियर निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ।